Axmed Madoobe oo doorashada Gedo kaga adkaaday Farmaajo | KEYDMEDIA ENGLISH
Axmed Madoobe oo doorashada Gedo kaga adkaaday Farmaajo
Axmed Madoobo, wuxuu geed dheer iyo mid gaaban u koray inuu Farmaajo ka hor istaago inuu hal kursi uu ka helo Jubaland, qorshahaas ayaana u muuqda inuu ugu danbeyn hirgali karo, haddi doorashada 16-ka kursi ka hor dhamaadka bishaan lagu qabto Ceel-waaq.
CEEL-WAAQ, Soomaaliya – Wararka ka imaanaya gobolka Gedo, ayaa sheegaya in ay socoto qaban qaabadii ugu danbeysay ee ku aaddan, sidii doorashada 16 kursi oo degaan doorashadoodu ahayd, degmada Garbahaarrey, loogu wareejin laa Ceel-waaq.
Dhamaadki Todobaadkii hore ayuu xoogeystay, warka sheegaya in Axmed Madoobe iyo Ra’iisul Wasaare Rooble, isku af-garteen in laga guuro degmada Farmaajo maamulo ee Garbahaarrey, si aysan doorashada kuraastu uga harin kuraasta baarlamaanka 11-aad.
Dhawaan wafdi ka socda maamulka Jubbaland, oo u badan, golaha wasiirada kana soo jeeda degaankaas, ayaa gaaray magaalada Ceelwaaq ee gobalka Gedo, halkaas oo ugu danbeyn la filayo in si buuxda loogu dhawaaqo in ay mati-galineyso doorashada gobolkaas.
Ceel-waaq waxaa gacanta ku haya, maamul ka amar qaata Madaxweynaha Jubbland, Axmed Madoobe, waxaana ku sugan ciidan ka socda dalka Kenya, halka Garbahaarrey ay ku sugan yihiin ciidamo ka amar qaata Farmaajo oo qaab qabiil u abaabulan.
Guddiga Hirgalinta Doorashooyinka heer Dowlad Goboleed ee Jubaland [SEIT], ayaa 7 maalin ka hor, ku dhawaaqay in 16-ka kursi ee ka harsan kuraasta Golaha Shacabka ee ku astaysn Jubaland doorashadooda lagu qaban doono mudo 2 todobaad ah.
Farmaajo, oo hore u qorsheeynayay inuu boobo guud ahaan 16-ka kursi, ayaa hadda la filayaa in uusan hal cod ka heli doonin kuraastaas, uu mudda hor taagnaa doorashadooda, waxaana xusid mudan in dhamaan shaqsiyaadkii ka ag-dhawaa ku soo jabeen Jubaland.